Shiinaha 3/16 Ball Carbon Steel Low oo loo isticmaalo Soo -saaraha Baaskiilka iyo Alaab -qeybiye | Lixin
Birta kaarboonku inta badan waxaa ku jira bir kaarboon yar (AISI1010/1015), bir kaarboon dhexdhexaad ah (AISI1045) iyo bir kaarboon sare (AISI1085). Warshadaha kubbadda birta ee saxda ah, kubbadaha birta kaarboonka hooseeya iyo kubbadaha birta kaarboonta sare ayaa caadi ahaan la isticmaalaa. Kubadaha birta kaarboon-ka-yar ayaa sidoo kale loo yaqaan kubadaha birta jilicsan, kuwaas oo leh awood yar, adayg yar iyo jilicsanaan, waxayna ku habboon yihiin farsamaynta sida qodista iyo garaacidda; kubadaha birta kaarboon-sare, oo sidoo kale loo yaqaan kubadaha birta adag, waxay leeyihiin xoog iyo adayg, xadka laastikada sare iyo xadka daalka (gaar ahaan xadka daalka), oo ku habboon codsiyada leh shuruudaha adkaysiga sare iyo duugga hoose.
Awoodda la xoojiyay iyo sumcadda lagu kalsoonaan karo, waxaan halkan u joognaa inaan u adeegno macaamiisheena annaga oo bixinayna tayada iyo adeegga ugu sarreeya, si kal iyo laab ah ayaan u bogaadinaynaa taageeradaada. Waxaan ku dadaali doonaa inaan ilaalino sumcaddayada weyn sida alaab -qeybiyeyaasha alaabada ugu fiican adduunka. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama faallooyin ah, fadlan nala soo xiriir si xor ah.
Kubadda birta kaarboonka ee hooseysa: biraha alaabta guriga iyo rollers, khaanadaha iyo dhejiska duubista, qufulada, saliidaha iyo dufannada, kabaha, caddies, alaabta carruurtu ku ciyaarto, suunka iyo wareejiyaha roogga, dhammeynta dhicitaanka. Farsamooyinka daahyada, rasaasta birta ah, rasaasta, qalabka wax kiciya iyo kuwa wax ku qasaa ee aan ahayn deegaan dagaal badan, qalabka alxanka. baaskiil iyo qaybaha baabuurta, kiciyeyaasha, biraha dhaadhaca, biraha khaanadda, kabaha barafka, makiinadaha wax lagu rido, qasabadaha, qufulada, cutubyada wax lagu dhajiyo, mashiinnada wax lagu nadiifiyo iyo wax lagu shiido.
0.70 ~ 1.00
1.250kg/xirxirida durbaanka birta, 4 durbaan oo ku jira hal sariir, 78cm*78cm
2. 10kg/sanduuq, 100 sanduuq oo ku jira hal kiish oo alwaax ah, 92cm*73cm*67cm
3. 5kg/polybag, 90 bacaha oo ku jira hal kiish oo alwaax ah, 60cm*80cm*40cm
4. 25kg/kartoon, 40-60cartons/pallet, 92cm*73cm*67cm
Xusuusin: Waxaan sidoo kale ku xirxiri karnaa kubadaha sida waafaqsan shuruudahaaga.
Habka Lacag -bixinta: T/T, Western Union, Paypal, L/C.
Maraakiibta & Waqtiga Bixinta
1) In ka yar 45 Kg: DHL, TNT, FedEx, UPS express ayaa fiicnaan doonta
(4-7 maalmood ayaa laguugu keenay ciwaankaaga)
2) Inta u dhaxaysa 45 ilaa 200 Kg: Gaadiidka cirka ayaa fiicnaan doona
(5-14 maalmood ayaa lagu geeyey gegida diyaaradahaaga)
3) In ka badan 200 Kg: Gaadiidka badda ayaa fiicnaan doona
(Ugu jaban, 18-45 maalmood dekeddaada)
Xusuusin: Waxaan kuu dooran doonnaa xamuulka ugu fiican si aad u keydiso qiimaha dhoofinta. Ka sokow waxaan bixinnaa dhammaan dukumiintiyada loo baahan yahay ee caadada deegaankaaga.
Hore: 5/16 Chrome Steel Ball oo laga sameeyay Shiinaha
Xiga: OEM Customized China Standard Steel Ball 6mm Carbon Steel Ball for Baaskiilka
3/16 kubbadda birta kaarboonta yar
4.905mm AISI1085 SWRH82B G100 bir kaarboon sare ...
Kubadaha Copper -ka Yar, Kubadda naxaasta, Madax Ball Check naxaas, Kubbadda Naxaasta ee Adag, H62 Kubadda Naxaasta, Kubadda naxaasta ee H65,